Barcelona Bridal Week, agbamakwụkwọ na ọnọdụ nke 2015 | Bezzia
Eva alonso | | Okpokoro
Ọ bụrụ na ị na-akwadebe gị agbamakwụkwọ ọzọ, ị gaghị echefu a chịkọtara nke ọnọdụ na Agbamakwụkwọ ejiji maka 2015. The ogbo, na Gaudí Na-alụ nwanyị ọhụrụ n'okporo ụzọ, otu n'ime nnukwu nhọpụta nke Barcelona Bridal Week show, nke ndị isi na-emepụta ejiji na ụdị ejiji maka ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ gosipụtara atụmatụ ha maka oge ọzọ.
Rosa Clara, otu n'ime ndị ọkacha mmasị nke ndị na-alụ nwanyị Spanish, na-ahụ maka imeghe Gaudí Novias catwalk na nchịkọta nrọ nke sitere na New York City na ụfọdụ akara ngosi ya na sinima.
1 Rosa Clará, ụmụ nwanyị New York
2 Victorio & Lucchino, ndị nwunye nke South
3 Jesús Peiró, uwe-ịchọ mma
4 YolanCris, nwunye nwa nwanyị nke bohemian
5 Isabel Zapardiez, anwansi nke oké osimiri
6 Hannibal Laguna, ubi a na-arọ nrọ
7 Pronovias, afọ 50 na-eme nrọ
Rosa Clará, ụmụ nwanyị New York
N'oge a, onye mmebe Rosa Clará sitere na New York: na ngwakọta nke ọnọdụ ndị Big Apple na-eku ume na ụfọdụ n'ime ụmụ nwanyị kachasị ama ama. Audrey Hepburn, Grace Kelly, Annie Hall ma ọ bụ ndị protagonists nke usoro 'Mmekọahụ na New York' bụ ntụaka nke nchịkọta dịgasị iche iche. Site n'uwe ihunanya ndi nwere mkpuru osisi nwere nnukwu okwute, rue uwe 'mmanya' ndi nwere ikuku obodo.
Victorio & Lucchino, ndị nwunye nke South
Victorio & Lucchino abụrụla ndị nwa amaala Andalusia si n'ike mmụọ nsọ mepụta mkpokọta na-agwakọta flamenco na-eji bohemian na iru ike. Uwe zuru oke maka agbamakwụkwọ na South, n'ụsọ osimiri, na-egbutu ma daa na mmegharị.
Ndị na-emepụta ihe enyela anyị nwanyị na-alụ nwanyị nwere mmekọahụ, na-enye ọmarịcha ihe niile n'azụ, yana ọtụtụ olu na nghọta.
Jesús Peiró, uwe-ịchọ mma
Nme nke Jesús Peiró bụ otu n'ime ihe ndị a kụrụ nke Barcelona Bridal Week. Lọ ọrụ ahụ, nke onye na-emepụta ihe bụ Merche Segarra duziri, etinyela nchịkọta ọhụrụ ya na catwalk 'Ihe ịchọ mma', Na-eji ohere nke igba egbe mbụ ya maka ndị na-alụ ọhụrụ.
Uwe Jesús Peiró na-akpali agụụ mmekọahụ, nwanyị, mara mma. Na nkwupụta a, enwekwara ohere maka olu, ọkachasị na azụ, yana maka nghọta. Mana ihe wetaara aka kachasị mma bụ ọla-edo nke ụlọ ọrụ ahụ, nwere ngwa na ọla edo ma ọ bụ ọla kọpa, paillettes, embroidery and rhinestones.
YolanCris, nwunye nwa nwanyị nke bohemian
Smụ nwanyị Yolanda na Cristina Pérez egosiputala nchịkọta agbamakwụkwọ ọhụrụ ha na Barcelona Bridal Week, ihe ọhụụ na avant-garde maka ndị na-alụ nwanyị na-enweghị atụ bụ ndị na-achọ ime ka uwe ha nwee mmetụta n'ụbọchị agbamakwụkwọ ha. Atụmatụ YolanCris bụ nke izizi, dị iche iche, ma na-akọwagharị ụdị ejiji agbamakwụkwọ kachasị ọhụrụ.
Ya mere, anyị nwere nwunye nwanyị Bohemia nke na-etinye aka na iyi boho-chic anya nakwa na agbamakwụkwọ gị. Agbụrụ agbụrụ, ụdị ejiji dị egwu na nke na-akpali akpali, maka nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ na nwanyị nwere ịhụnanya. Ntughari aka, ocha aka, uwe, crochet na obuna feathers bu uzo kpakpando nke ndi a.
Isabel Zapardiez, anwansi nke oké osimiri
Isabel Zapardiez esitela na mmiri enigmatic nweta ume ya. Na ebighebi nke ebili mmiri Ọ na-atụ aro onye mmebe akwa uwe na-asọ asọ, nwere ụdị dị iche iche yana akwa ndị na - akpali akpali mmiri.
Nwanyị nwanyị Zapardiez bụ nwa nwanyị na-emekọ ihe n'oge a, onye na-achọ iji gosipụta ụdị ya site na iji akara ngosipụta nwere ọtụtụ mmegharị na egwuregwu nke mpịakọta. Iji mezuo mmetụta a, onye nrụpụta ejirila akwa dịka organza, tulle ma ọ bụ satin rụọ ọrụ, nke a na-ese mgbe ụfọdụ na ndò ndị na-ahụkarị n'ụsọ oké osimiri, dị ka acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ụda ájá. Ihe ngbanwe na nkpa oke ndi mmadu na enyere aka ime ka mmeghari nke oke osimiri.
Hannibal Laguna, ubi a na-arọ nrọ
Nchịkọta Hannibal Laguna bụ otu n'ime mkpokọta ịhụnanya na kpochapụwo nke anyị hụrụ na Gaudí Novias catwalk. Onye mmebe ahụ, otu n'ime ndị lagoro ezumike nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ, chọrọ ịnakọta ụfọdụ ụzọ dị mkpa nke ọrụ ya na nchịkọta a akpọrọ 'Otu ụbọchị'
Nke ọ bụla n'ime ihe ndị a sitere n'ike mmụọ site na ifuru sitere na ogige Hannibal Laguna, dị ka lili, magnolias ma ọ bụ daisies.Nke okooko osisi ndị a, onye na-ese ihe na-agbanwe mpịakọta na profaịlụ ha: akara n'úkwù, uwe mwụda na-enweghị isi, ahịrị ndị na-asọ. palette bụ otu n'ime ihe ịtụnanya nke atụmatụ ahụ: ọcha a kpochapụla na-enye akụkụ nke ọkwá ya na pink, nke meworo ka ọ bụrụ nke kacha mma maka njem ahụ.
Pronovias, afọ 50 na-eme nrọ
Obi abụọ adịghị ya, isi ihe dị na Bridal Week nke Barcelona bụ ihe ngosi Pronovias ogologo oge. Lọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike mgbe niile na ejiji agbamakwụkwọ, mana oge a, na mgbakwunye, mere ememe agbamakwụkwọ ya dị ka otu n’ime ndị isi na ngalaba ahụ. Afọ iri ise eji edozi ndị agbamakwụkwọ, ụbọchị nke kwesiri ka emee ya na ụdị ya na njegharị nke mere ka emetụ Gaudí Novias catwalk.
Ndị ama ama dịka Camila Alves, Bar Refaeli, Ana Boyer, Genoveva Casanova ma ọ bụ Malena Costa achọghị ịhapụ ngagharị Pronovias site na 'ahịrị n'ihu'. Na catwalk, ma na-eduga ndị ọzọ ụdị, otu nnukwu Karolina Kurkova onye mepere wee mechie ihe ngosi jiri uwe kachasi nma.
Nchịkọta, akpọrọ 'Factlọ ọrụ nke nrọ', nzọ na-adị ọcha ma na-akpachapụ anya, ma na-etinye uche niile na nkọwa na ihe ịchọ mma (paillettes, feathers, pearl, bows, embroidery). Atụmatụ abụọ ahụ bụ otu n'ime ihe ndị ga - egosi oge agbamakwụkwọ 2015, yana nghọta na egwuregwu tulle.
Otu n’ime ihe ngosi ọhụrụ nke mkpokọta Pronovias maka 2015 bụ iwebata agba ọhụrụ, dị ka acha anụnụ anụnụ, pink peach ma ọ bụ ọla edo na-agbakwunye na agba agba, na-egosi na enwere ndụ karịrị ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Okpokoro » Barcelona Bridal Week, agbamakwụkwọ na ọnọdụ nke 2015